Semalt विशेषज्ञ हष्ट टैग मार्केटिंगका लागि आवश्यक रणनीतिहरू प्रकट गर्दछ
यदि तपाईं मार्केटिंगका लागि इन्स्टाग्राम वा ट्विटर प्रयोग गर्न राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ भने, ह्यासट्याग तपाईंलाई परिचित हुन सक्छ। समस्या, यद्यपि, यसको रणनीतिक प्रयोग गर्न आउँदा समस्या देखा पर्दछ। आज, hashtags जताततै छन्। विक्रेताको रूपमा, तपाईं तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न। तिनीहरूले तपाईंको सामग्रीको पहुँच विस्तार, तपाईंको ब्रान्ड विस्तार, तपाईंको एसईओ सुधार, तपाईंको बजार लक्षित, र तपाईंको सामग्री प्राप्त।
सामान्यतया, ह्याशटैगले शब्द वा शब्दहरूको समूहलाई जनाउँछ जुन # चिन्ह पछि देखा पर्दछ। यदि तपाईं अधिक प्राविधिक झुकाव भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईं उनीहरूलाई मेटाडाटा ट्यागको रूपमा चिन्न सक्नुहुन्छ। एक बजारका रूपमा, तपाइँ तपाइँलाई तपाइँको बजारमा तपाइँको उत्पादनहरू समावेश गर्न को लागी एक राम्रो तरीका को रूप मा थाहा छ।
Semalt वरिष्ठ बिक्री प्रबन्धक रायन जॉनसन hashtags को लागी केहि प्रमुख बजार रणनीतिहरु मा एक नजर ले।
१. ब्रान्ड र अभियान ह्याशटैगहरू
यी लेबलहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नै ब्रान्ड र प्रचार बढुवाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। विक्रेताको रूपमा तपाईले आफ्नो व्यवसायको लागि निश्चित ब्रान्ड ह्यासट्याग बनाउनु पर्छ। तपाईं एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको व्यवसाय परिभाषित गर्दछ र यसलाई तपाईंको हस्ताक्षर लेबल बनाउँदछ। एकचोटि तपाईंले व्यक्तिहरू प्रयोग गर्न पाउनुभयो भने, तिनीहरूले तपाईंको लागि तपाईंको ब्रान्ड मार्केट गर्नेछन्।
अभियान ह्यासट्यागहरू, अर्कोतर्फ, तपाईंको मार्केटि campaigns अभियानहरूका लागि विशेष रूपमा बनाइन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको स्टोर मा एक पदोन्नति छ, तपाइँ यस अभियान को प्रचार को लागी एक लेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिहरू उनीहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर, तपाईं आफ्नो अभियानको पहुँच विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। यस अवस्थामा, उत्तम विकल्प तपाईंको प्रचारको नाम प्रयोग गर्नु हो जबसम्म यो तपाईंको पदोन्नतिको लागि अद्वितीय हुन्छ।
२. हैशट्याग ट्रेन्ड्स
एक ट्रेंडि has हैशटैगलाई एक शीर्षकको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ जुन धेरै लोकप्रियता प्राप्त गर्दछ। तिनीहरू लगातार वास्तविक समय मा परिवर्तन। जब तपाइँ कुनै तरिकामा तपाइँको व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रवृत्ति देख्नुहुन्छ, तपाइँ ट्याग प्रयोग गरेर भाग लिनुपर्नेछ। तपाईंको सामग्रीमा यस्तो ट्याग प्रयोग गरेर तपाईंसँग सामूहिक दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्ने मौका छ।
यद्यपि तपाईले धेरै ट्र्यान्डि has ह्याशटैग पठाईरहनु भएको छ। यदि तपाईं धेरै ट्रेन्डहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको व्यवसायसँग सम्बन्धित छैन, यो एक गरीब लेबल मानिनेछ। केहि केसहरूमा तपाईले आफ्नो ट्विटर खातालाई निलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रचलनहरू पत्ता लगाउन धेरै सजिलो छ। ट्विटर र गुगल + ले उनीहरूका पृष्ठहरूमा ट्रेन्डिंग शीर्षकहरू प्रदर्शन गर्दछ, जुन जानकारीको राम्रो स्रोत हुन सक्छ।
Hash. हैशट्याग सामग्री
यी ह्यासट्यागहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो पोष्टहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। तिनीहरू सामान्य रूपमा ब्रान्ड गरिएका हुँदैनन्। तिनीहरू पनि धेरै लोकप्रिय वा प्रचलनमा छैनन्। ती साधारण साधारण ह्याशटैगहरू हुन् जुन तपाईको पोष्ट गरिएको सामग्रीसँग सम्बन्धित छ। सामान्यतया, यसले तपाईका पोष्टहरूको एसईओ सुधार गर्दछ, ह्यासट्याग प्रयोग गरेर केहि खोजशब्दहरूको लागि खोजी गर्ने उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरी।
यदि तपाईं आफ्नो सामग्री हैशटैग प्रभावी हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु जस्तै सोच्न पर्छ। तपाईंको ह्यासट्यागहरू मात्र सफल हुन्छन् यदि तिनीहरूले तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरू बजारमा जडान गर्छन्। यदि तपाईंको व्यवसाय स्थान आधारित छ भने, त्यसोभए तपाईंले आफ्नो स्थानीय समुदायसँग जडान गर्न आवश्यक छ। तपाईं भू-सेग्मेन्ट ह्याशटैगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको समुदायमा तपाईंको व्यावसायको लोकप्रियता बढाउँदछ।